သခင့်စကား ဝိညာဉ်ရေးရာစာစောင် သြဂုတ်-၂၀၁၄ အမှတ်(၁၅၆)
ကဗျာ၊ ဆောင်းပါးများ နှင့် သက်သေခံချက်များ
နေချင်တယ် သခင့်အရိပ် S Jame
ထွန်းတောက်သော မိုဃ်းသောက်ကြယ်(ဆရာတော်စောစံအောင်)
ဘဏ္ဍာနှင့်ပါဝါ (၈) MD တမူး
သန့်ရှင်းမြင့်မြတ် စုံလင်တော်မူ၍ လူသားမျိူးနွယ် အသီးသီး တို့၏ ခိုလှုံ ကိုးစားရာ ဖြစ်တဲ့ ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဘုရင် အဖ ဘုရား သခင်၏ ဘုန်းတော် ကမ္ဘာ အဆက်ဆက် တည်ရှိပါစေ။ မြတ်သော သခင် ယေရှု နာမတော်ကို အမှီပြု၍ ကျေးဇူး တင်ပါ၏ အဖ။ သခင့်စကားစာစောင်ကို စီစဉ် ထုတ်ဝေပေးတဲ့ အယ်ဒီတာ ဆရာ မင်းအောင်သက်လွင်တို့ မိသားစုအပေါ်ကို ဘုရား သခင်ရဲ့ ကြွယ်ဝပြည့်စုံတဲ့ ဆုကျေးဇူး ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ သွန်းလောင်း ချပေး ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ယုဒသန် အသင်းတော် စင်ကာပူ JBCS ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဒီစာစောင်လေးထဲကနေ ဖော်ပြပါတယ်။ သမီး အတွက် ဝိညာဉ်ရေး မျက်စိဖွင့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ ဘုရား သခင်ရဲ့ ဆုကျေးဇူး ကောင်းကြီး မင်္ဂလာအဖြာဖြာ JBCS အသင်းတော်ကို ပို၍ သွန်းလောင်း ချပေးပါစေ။
ဝိညာဉ်မျိူးစေ့ ပို၍ကြဲနိုင်ပါစေ။ ကျွန်မ သက်သေခံချက် စာရေး ချင်တာ ကြာပါပြီ။ ဘုရားသခင်ကို ကျွန်မ ပြောတယ် သမီးကို ဒီနိုင်ငံမှာ နေခွင့် ပေးရင် သမီး သက်သေ ခံမယ်လို့။ ဘုရားသခင်က နေခွင့် ပေးတယ်။ ဒီနိုင်ငံ လာဖို့ အားပေးခဲ့တဲ့ တစ်ဦး တည်းသော အဒေါ်ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လွယ်လွယ် ကူကူ တော့ မနေခဲ့ရဘူး။ ကျေးဇူးတော်ပါဘ။ဲ ခက်ခဲလေ ခရစ်တော်ကို ပိုတွေ့ရ လေဘဲ။ ဒီရောက်မှ နှလုံးသား ထဲက ခရစ်တော်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ခရစ်တော်ရဲ့ ကောင်းမြတ်ခြင်း အကြောင်းကို သက်သေခံ စာရေးရမယ်ဆိုရင် မကုန်နိုင်ပါဘူး။ နေ့ရက် စဉ်တိုင်း ကျေးဇူး တော်တေနွဲ့ ပြည့်နေလို့ပါဘ။ဲ တကယ်ပါဘ။ဲ ယေရှု ကြောင့် သာ အသက်ရှင်တာ၊ ယေရှုကြောင့်သာ ကျန်းမာတာ၊ ယေရှုကြောင့်သာ လွတ်မြောက် တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ အကြံအစည်က ဒူဘိုင်းနိုင်ငံကို ဟိုတယ် ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ သွားချင်တယ်။ အင်တာဗျူးလဲဖြေပြီးပြီ။ (၂)လ စောင့်ရမယ်တဲ့။ ဗီဇာ ကျလာဖို့ (၂)လ ကျော်သွားတယ်။ မကျလာဘူး။ ဒါနဲ့ ကျွန်မ ဘုရားသခင်ကို ပြောတယ်။ သမီး နိုင်ငံခြား သွားချင်တယ်။ ယေရှု သမီးကိုချစ်တယ်ဆိုရင် နိုင်ငံခြား ပို့ပေးပါလို့ ကျွန်မ ဆုတောင်းတယ်။ ဘုရားသခင် ပြင်ဆင်ပေးမယ်လို့ ကျွန်မ ယုံကြည်တယ်။ တစ်နေ့ကျ တော့ ကျွန်မ အဒေါ်က ပြောတယ်။ စင်္ကာပူ သွားမလားတဲ့။ အိမ် အကူ အနေနဲ့တဲ့။ အဒေါ်လဲ သွားမယ်တဲ့။ ကျွန်မတို့ တူဝရီး နှစ်ယောက် အတူတူ သွားရမယ်ဆိုတော့ သွားမယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ Agent fee က (၇)လ ဆပ်ရမယ်တဲ့။ ကျွန်မ က Passpost လက်ထဲမှာဆိုတော့ ကျွန်မ အရင်သွားရမယ်တဲ့။ အဒေါ်က နောက်မှ လိုက်လာမယ်တဲ့။ ကျွန်မ အတွက် စာရွက်စာတမ်းတွေ တင်ပြီးပြီတဲ့။ (၇) ပတ် လောက်ဆို ကျလာမယ်တဲ့။ ကျွန်မ ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းတယ်။ စင်္ကာပူ နဲ့ ဒူဘိုင်း အလိုတော်ရှိတဲ့နေရာကို ပို့ပေးပါလို့။ agent ဆီမှာ သင်တန်း သွားတက် ရတယ်။ တစ်ခါနှစ်ခါဘဲ သွားတက်ပြီး သွားမတက်ဖြစ်တော့ဘူး။ တစ်နေ့တော့ ကျွန်မ အိမ်နားက ဖုန်းဆိုင်က အဒေါ်က ခေါ်ပြောတယ်။ ကျွန်မ အဒေါ်ကို အိမ်အကူ အနေနဲ့ စင်ကာပူ သွားမလားတဲ့။ agent (၂) လခ ဘဲ ပေးရမယ်တဲ့။ အဒေါ်က ကျွန်မကို သွားမလားတဲ့။ ဘုရားသခင် ဘယ်လောက် ကောင်းမြတ်သလဲ။ agent ခ (၇)လ ကနေ (၂)လခပဲ ပေးရအောင် ပြင်ဆင်ပေးတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ဘုရားသခင်ရဲ့ အကြံအစည် မြင့်မြတ် ကြောင်း သိရပါတယ်။ အဒေါ်ကို ဘုရားသခင် အလိုရှိရင် သွားမယ်လို့ ပြောလိုက် တယ်။ နဂိုတုံးက တင်ထားတဲ့ agent ကို မသွားတော့ဘူးလို့ ပြောလိုက်တယ်။ ဒီကို မလာခင် တစ်ပတ်က ကျွန်မ ချောင်း ဆိုး တာ တအားဘဲ။ ကျွန်မ ငယ်ငယ်လေး ထဲက ရင်ကျပ်ရှိတယ်။ အမိုးနဲ့အပါးက လုပ်နိုင်လို့လားတဲ့။ စင်္ကာပူ အိမ်အကူ လုပ် ရတာ ပင်ပန်းတယ်နော်တဲ့။ ဆေးသေချာ စစ်သွားအုံးတဲ့။ ဆေးစစ်တော့ အောင်တယ်။ (၂)ရက် လောက်ကြာတော့ ဗီဇာ ကျလာ တယ်။ မိဘက ပင်ပန်းတာမို့ မသွား စေချင်ဘူး။ အဒေါ်က ဘုရားသမီးဘဲတဲ့ ဘုရား သခင် ပြင်ဆင်ပေးမှာတဲ့လေ။ ကျွန်မက ယုံကြည်တယ်။ ဘုရားသခင် ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ အကြံ အစည်ဘဲပေါ့။ agent နဲ့ အမိုး သွားတွေ့တယ်။ ကျွန်မ အလုပ် လုပ်ရမဲ့ အိမ်ရှင် တွေ အကြောင်း နဲနဲ သိလာရတယ်။ (၃)လ ပြည့်ရင်(၂)ပတ်မှာ တစ်ရက် အားလပ်ခွင့် ပေးမယ်တဲ့။ ဘုရားကျောင်း တက်ရခွင့်ရလို့ ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မိဘက ခွင့်ပြု လိုက်တယ်။ အဒေါ့်ကို ကျွန်မ ဘုရားသခင်နဲ့ အတူသွားမယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ၁၄.၁၁.၂၀၁၁ သွားရမယ်တဲ့။ လေယာဉ်လက်မှတ်လဲ ဝယ်ပြီးပြီးတဲ့။ ကျွန်မ သွားချင် တာဘဲ သိတယ်။ သွားရင် လိုအပ်တာ ဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံလည်း မရှိပါဘူး။ လေယာဉ် လက်မှတ်ဖိုးလည်း မရှိပါဘူး။ ဘုရားသခင်က အလုံးစုံကို တာဝန်ယူပြီး ပြင်ဆင် ပေးပါတယ်။
သွားတဲ့နေ့ လေဆိပ် ရောက်တော့ စာရွက်စာတမ်း စစ်တော့ တံဆိပ်တုံး မပါလို့ မရဘူးတဲ့။ agent က လိုက်မပို့ဘူး၊ သူ့ကို ဖုန်းဆက်တော့လည်း မရ။ လေဆိပ်ထဲ ဝင်လို့မရဘူး။ အမိုး ကလည်း သေချာ မစစ်ဆေးရ ကောင်းလား ဆိုပြီး ဆူတယ်၊ ကျွန်မ စိတ်ညစ်သွားတယ်။ ရောက်ခါနီးမှ အမြီးက တစ် နေတယ် လေ။ ကျွန်မ ဆု မတောင်းမိဘူး။ ကျွန်မတို့ ဘုရားသခင်က မတောင်းဘဲ လိုအပ်ရင် ပေးတဲ့ ဘုရား ဖြစ်ပါတယ်။ agent ကို ဖုန်းခေါ်လို့ ရသွားတယ်။ agent ရောက်လာပြီး သူသွားတုန်းက ဒီအတိုင်းဘဲ သွားတာ ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ လေယာဉ်က ထွက်တော့မယ်။ သူနဲ့ ကျွန်မ လေယာဉ်ရုံးအထဲ ဝင်သွားပြီး ပထမ တန်းစီတဲ့ နေရာကို မသွားဘဲ အခြားဘက်ကို တန်းစီ ကြည့်တယ်။ စစ်တဲ့သူက တံဆိပ်တုံးမပါလို့ မရဘူးတဲ့။ စင်္ကာပူက ပေးလိုက်တဲ့ အတိုင်းဘဲ လို့ agent က ပြန်ပြောတယ်။ လေယာဉ်မယ်က လေယာဉ်ထွက်ချိန် နီးနေပြီးလို့ ပြောတော့ ဒါဆို ဒီမှာ လက်မှတ် ထိုးသွားတဲ့။ တကယ်လို့ စင်္ကာပူလေဆိပ်က လက်မခံရင် သူတို့ တာဝန် မယူဘူးလို့ ပြောပြီး ဝင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတော်ပါပဲ။
agent က ဆုတောင်းသွားတဲ့။ ဘုရားသခင် ပြင်ဆင်ပေးမယ်တဲ့။ စင်ကာပူရောက်တော့ လေယာဉ်ပေါ်မှာ white card ကို မဖြည့် လာမိပြန်ဘူး။ ဘယ်လို ဖြည့်ရမှန်း မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်က ကူညီမဲ့သူ အားလုံးကို စီစဉ် ပေးထားပါတယ်။ ချန်ဂီလေဆိပ်မှာ တာဝန်ကျ လုံခြုံရေး က ကျွန်မကို တွေ့တော့ စာရွက် ဖြည့်ပြီးပြီလားတဲ့။ ကျွန်မက မဖြည့်ရသေး ဘူးလို့ ပြောတော့ ဒါနဲ့ သူက ကျွန်မ စာရွက်ယူပြီး သူဖြည့်ပေးတယ်။ ကျေးဇူးတော်ပဲ။ ကောင်တာ ရောက်လို့ စာရွက် ပြလိုက်တော့ ဘာမှမပြောဘူး။ ရပြီတဲ့။ ကျေးဇူးတော် ပဲ။ အိမ်ရှင် ကိုယ်တိုင် လာကြိုတယ်။ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် စင်္ကာပူကို ရောက်လာ ခဲ့ပါတယ်။ ကျေးဇူးတော်ကို အစဉ်အမြဲ ချီးမွမ်းမယ်လေ။ စုံစမ်း နှောက်ယှက်ခြင်းနဲ့ တွေ့ကြုံရလဲ။ ဘုရား သားသမီးတွေဘဲ စိတ်ပျက်လို့ မနေနဲ့။ ဘုရား ပြင်ဆင်ပေးမယ်။ ယုံကြည်လိုက်ပါ။
GOD is good all time.That’s amazing Grace. Praise the Lord. (ဟာလေလုယာ)။ လူသည် အထူးထူး အပြားပြား ကြံစည်တတ်၏။ သို့ရာတွင် ထာဝရဘုရား၏ အကြံတော်သည် တည်လိမ့်မည်။ သုတ္တံ(၁၉း၂၁) ငါသည် သင်တို့ကို အကျိူးနည်းစေခြင်းငှာ ကြံစည်သော အကြံ မဟုတ်ဘဲ၊ သင်တို့သည် မြှော်လင့်သော အကျိူးကိုရမည်အကြောင်း၊ ငြိမ်ဝပ်စေခြင်းငှာသာ၊ သင်တို့အဘို့ ကြံစည်သော အကြံ တို့ကို ငါသိ၏။ တဖန် မိန့်တော်မူသည်ကား သင်တို့သည် ငါ့ကို ခေါ်၍ သွားလာကြ လိမ့်မည်။ ဆုတောင်းသောအခါ သင်တို့ စကားကို ငါနားထောင်မည်။ ငါ့ကို ရှာသော အခါ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့နှင့် ရှာလျှင် တွေ့ကြလိမ့်မည်။ ငါသည်လည်း သင်တို့ကို အတွေ့ခံမည်။(ယေရမိ၂၉း၁၁-၁၃)။ ။ နန်းမေရီလင်း